पूर्व भारतिय सेना प्रमुख अशोक मेहता र प्रधानमन्त्री ओलीबिच सिंगापुरमै गोप्य भेटवार्ता
पूर्व भारतिय सेना प्रमुख अशोक मेहता र प्रधानमन्त्री ओलीबिच सिंगापुरमै गोप्य भेटवार्ता - Nepal Talk
श्रावण १९ गते, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौ । नेपाली राजनीतिमा विभिन्न घटना परिघटनाहरु घट्नु स्वभावीकै मानिएको छ। नेपालको राजनीति घटनामा विदेशी शत्तीहरुको हालीमुहाली उस्तै छ। सरकार र पार्टीमा कुनै विवाद निम्तिए पछि विदेशी शक्तीहरुकोे चलखेल भई रहेको छ। सरकारको नेतृत्व लिन वा प्रधानमन्त्री बन्नका लागी विदेशी शक्त्तीहरुको शरणमा पुग्ने प्रचलन अझै कायमै छ। नेपालको पछिल्लो राजनीति घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि यो प्रश्ट नै भएको छ । जब सरकार पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ तब कुनै न कुनै बाहाना बनाएर नेताहरु विदेश जाने गरेका छन्। यसरी नेताहरु विदेश केन्द्रीत हुनु र विदेशी शत्तीहरु नेपाल तिर केन्द्रीत हुनु निकै ठुलो विषय बनेको छ।
प्रचण्ड स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर भ्रमणमा निस्कीनुले पनि शंका उत्पन्न भएको छ। आ–आफ्नो राजनीति सुरक्षा संरक्षणका लागि नेताहरु बिदेश जाने गरेको स्रोतले बताउदै आएको छ । सिंगापुरमा ओलीले पुर्व भारतिय सेना प्रमुख अशोक मेहतासँग भेटवार्ता गरेको सरकारी निकायको एक उच्च स्रोतले बताएको छ। भेटमा सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालन लगाएत अन्य विभिन्न विषयमा छलफल भएको स्रोत बताउछ। अशोक मेहताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्ररीस्थीति /प्रस्ताव अनुसार अघी बढ्न सल्लाह सुझाव दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ।
कार्य विभाजन रोकेर आखिर किन गए ओली-प्रचण्ड विदेश
नेकपाको केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन प्रस्ताव फेरि पछि धकेलिएको प्रती नेता कार्यकर्ताहरुले आपत्ती जनाउदै आएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय विभाग अन्तर्गतको स्कुल विभागको नेतृत्वमा पूर्वपार्टीका दुई धारका बीच मतभेद बढिरहेका बेला नेताहरूले त्यसलाई टुंगो नलगाई सचिवालय बैठक पछि धकेलेका हुन्।
तत्कालीन एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकता भएको १५ महिना बिति सक्दा पनि कार्य विभाजनमै अलमल भइरहेको छ। सचिवालय बैठकपछि धकेलेर अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विदेश भ्रमणमा निस्कीए पछि एकता प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको हो।
साउन ५ यता मात्रै तीन पटक स्थगित सचिवालय बैठक सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। तर बैठकमा कार्य विभाजन प्रस्तावमा नेताहरूले अझै गृहकार्य नपुगेको धारणा राखेपछि बैठक २८ साउनसम्मका लागि स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए।
नेकपाका ३२ विभागमध्ये स्कुल विभागको नेतृत्वको विवाद मिलाउन नेतृत्वलाई मुस्किल परि रहेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठ र अर्का सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त विभागको दाबी नछोडेपछि अध्यक्षद्दयलाई नेतृत्व टुंगो लगाउन सकस परेको हो। सचिवालयमै रहेका श्रेष्ठ र पोखरेलले स्कुल विभागको दाबी नछोडेपछि स्थायी समितिबाट पनि नेताहरू डा वेदुराम भुसाल र घनश्याम भुसालले विभागको दाबी गरेका छन्।
अध्यक्षद्वयले नै विदेश भ्रमणको कार्यतालिका बनेको बताएपछि सचिवालय सदस्यहरू अचम्भित भएका थिए। बैठकमा अन्तर्राष्टिय बाघ दिवसका विषयमा मात्रै झन्डै आधा घण्टा नेताहरुले चर्चा गरेका थिए। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बाघ दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन पहिले रसिया भ्रमणका गएको स्मरणदेखि नेपालले लिएको लक्ष्य अनुसार सन् २०२२ सम्म नेपालमा बाघको संख्या कसरी बढाउन सकन्छि भन्नेमा पनि सचिवालय बैठकमा नेताहरुले छलफल गरेका थिए।
यस्तो थियो प्रचण्ड प्रभानमन्त्री बन्ने सहमती
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते ६ बुँदे संयुक्त घोषणा भयो । पार्टी एकीकरणलाई औपचारिकता दिइयो । त्यसको अघिल्लो दिन नै दुई पार्टीबीच गोप्य पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । जसले फरक–फरक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिबाट आएका दुई दलबीच एकीकरणको वातावरण तयार भयो ।
सहमतिबारे नेकपावृत्तमा गाइँगुइँ चलेको भए पनि बाहिर आएको थिएन । तर, केहीदिनअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुख फोरेपछि ‘गोप्य सहमति’ अनावरण भएको हो । गत सोमबार पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा प्रचण्ड विराटनगर पुगेका थिए । त्यही कार्यक्रममा उनले पार्टी एकीकरणको अघिल्लोदिन बालुवाटारमा भएको सहमतिबारे पहिलो पटक मुख खोलेका थिए।
सरकारको नेतृत्वबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भनेका थिए, “पार्टी एकताका बेला एउटा समझदारी गरेका थियौँ, त्यो सबैलाई थाहा छ, मेरो मुखबाट नबोलाउनूहोस् ।” त्यसो भनेका प्रचण्डले टेलिभिजनमा कुरा गर्दै केपी ओली र आफूले सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको खुलासा गरेका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा केपी ओली र आफूले साढे दुई–साढे दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको बताएका थिए । “पार्टी एकता गर्दा समझदारी भएको छ । पार्टीको निर्णय गर्दा सहमतिबाट जानुपर्छ। सरकारको नेतृत्व आलोपालोबाट गर्ने सहमति भएको छ,” प्रचण्डको भनाइ थियो । लिखित सहमति भएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने– “लिखितै छ । बाहिरै आइ सकेको छ। किताबमा छापिएरै आइ सकेको छ ।”
आखिर सहमतिमा के छ ?
नेकपाले एक वर्षसम्म सहमति गोप्य राखेको थियो। तर, एबीसी टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले लेखेको ऐतिहासिक एकताका आधारहरूमा अत्यन्त गोप्य राखिएको उक्त सहमति छापिएको छ । पाना नम्बर २०१ मा सहमतिको छ बुँदा खुलाइएको छ भने पाना नम्बर २ मा सम्झौताको प्रतिलिपि नै छापिएको छ।
दोस्रो बुँदामा पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने उल्लेख छ।